novembre 2017 - Page 3 sur 85 -
Seces : Nivaha ny olana
30/11/2017 admintriatra 0
Amin’ny maha laharam-pahamehana ny fifampiresahana eo amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika, dia mitohy hatrany ny fitadiavam-bahaolana taorian’ny fihaonana izay nifanesy teo amin’ny birao nasionalin’ny Seces sy ny minisitera mpiahy. Fantatra amin’izao fotoana …Tohiny
EPP Ivandry : Niampy ny efi-tranon-tsekoly
Nanana olana noho ny tsy fahampian’ny efi-trano fianarana ny EPP Ivandry. Araka ny fantatra, dia ny maraina ihany no mianatra ireo ankizy mpanala fanadinana kilasy faha-5, izay lasa misy fiantraikany amin’ny voka-panadinana noho ny tsy …Tohiny
Paolo Raholinarivo : Voan’ny tazom-pahefana ?
Raha nivahiny tamin’ny haino aman-jery iray teto an-drenivohitra i Paolo Raholinarivo, dia tsy nanafina ny tenany fa tena mahantra sy fadiranovana « kamboty kely tsy mba manana na inona na inona », hoy ny filazany azy. …Tohiny
RN2 : Miverina amin’ny laoniny ny fitaterana
Nahazo valiny mahafa-po tamin’ny fanjakana mahakasika ny fitakian’izy ireo, ireo tompon’ny kaoperativa manao ny zotra mihazo ny lalam-pirenena RN2, momba ny teboka telo izay napetraka. Isan’izany ny fanamboarana ny simba amin’iny lalam-pirenena RN2 iny, ny …Tohiny
Jean Eric Rakotoarisoa : « Tsy nahazo tsindry sy vola ny HCC »
Nitondra fanazavana, mahakasika ny fahazoan’ny teo anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) tsindry sy vola ny filohany, Jean Eric Rakotoarisoa, omaly tetsy Ambohidahy Anosy. Tamin’izany indrindra no nilazany fa tsy nisy velively ny tsindry ...Tohiny
Praiminisitry ny marimaritra iraisana : Natolotry ny MAPAR i Ntsay Christian
Mamy Ravatomanga : Nanan-karena tamin’ny fanonganam-panjakana
Marc Ravalomanana : « Filan-kevitry ny minisitra sy ny Faritra…”